जहाँ महामुर्ख साबित हुन तछाडमछाड हुन्छ ! - Shirish News
जहाँ महामुर्ख साबित हुन तछाडमछाड हुन्छ !
जनकपुरधाममा आज होरी(होली) महोत्सव, भोली महामुर्ख सम्मेलनको आयोजना हुँदै
२०७८ चैत्र ३, बिहीबार ०८:५१ बजे
२०७६ मा मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत
धनुषा- मिथिला नाटयकला परिषद (मिनाप)ले प्रत्येक वर्ष धुमधामसंग मनाउँदै आएको होरी(होली) महोत्सवको आज विहिवार भव्य रुपमा मनाइने भएको छ।
होलीको जोगीरा प्रतियोगिता र महामुर्ख सम्मेलन गरि दुई दिन सम्म मनाइने होरी महोत्सव भव्य रुप मनाइने जानकारी मिथिला नाटय कला परिषद(मिनाप)ले गराएको छ।
प्रत्येक वर्ष झै यस वर्ष पनि जनकपुरधामको जानकी मन्दिरको प्रांगणमा मिनापले आज चैत ३ होरी महोत्सव र भोली ४ गते महामुर्ख सम्मेलनको आयोजना गरी होली महोत्सवको आयोजना गर्दैछ  ।
होलीको अवसरमा जनकपुरमा आयोजना गरिने महामुर्ख सम्मेलन देशैभरी प्रसिद्ध छन् । मिथिला क्षेत्रको सांस्कृति अभियानमा अग्रणी भुमिका खेलेको दावी गर्ने मिथिला नाटय कला परिषद, मिनाप यसका आयोजक हुन् ।
मिनापले मिथिला क्षेत्रवाट उच्च तहको बौद्धिक काम गर्ने जनालाई हरेक बर्ष छनौट गरेर महामुर्ख सहित विभिन्न व्यंगात्मक पदवी वाट समाजिक सम्मान गर्ने चलन छ । जुन मिथिला क्षेत्रमा चर्चीत पनि छन् । मिथिला नाटय कला परिषद कै भनाइलाई यदी सत्य मान्ने हो भन्ने विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरुलाई वर्षै पिच्छै छनौट गरेर यो पदवीवाट समाजिक सम्मान दिने चलन छ ।
आपसी भाईचाराको रुपमा लिईएको होली पर्वलाई जनकपुरधाममा हिन्दुसंगै मुश्लिम युवाहरुले पनि संगै मिलेर होली मनाएर आपसी सौहार्दताको परिचय दिदै आएका छन् ।
मिथिलामा वसन्त पंचमीको आगमनसंगै होली गित गाउन शुरु गरिन्छ । तर अहिले आएर ग्रामीण इलाकामा फागु गित गाउनेमा कमी हुन थालेपछि लोपोन्मुख फागु गीतलाई जगेर्ना गर्ने मिनापले विगत २६-२७ वर्षदेखि होरी महोत्सवको आयोजन गर्दै आएको छ ।
फागुपूणर्िमाको पूर्वसन्ध्यामा आयोजना हुने दुई दिने होली महोत्सवको पहिलो दिन फागु गीत प्रतियोगिता तथा दोस्रो दिन महामूर्ख सम्मेलनको आयोजन गरिन्छ ।
मिनापका महासचिव शैलेन्द्र मल्लिकले मैथिली भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति तथा लोकगीतको संरक्षण गर्न होली महोत्सव आयोजना गरिएको बताउनुभयो।
फागु गीत प्रतियोगितामा धनुषा, महोत्तरी, सिरहा, सप्तरी र सर्लाहीका आधा दर्जन ग्रामीण समूह सहभागी हुनेछन् । मिनापका महासचिव मल्लिकले पारम्परिक फागु गीत तथा डम्फालाई जगेर्ना गर्ने उद्देश्यले प्रतियोगिताको आयोजन गर्न लागिएको बताउनुभयो ।
महोत्सवको दोस्रो दिन आयोजन हुने महामूर्ख सम्मेलनमा समाजका अगुवा व्यक्तित्वलाई विशेष मानपदवी प्रदान गर्ने चलन छ  । जस अन्तर्गत महत्वपुणर् व्यक्तिलाई महामुर्खको उपाधी प्रदान गरिन्छ । जस अन्तर्गत महामुर्ख तथा अन्य उपाधीकर्तालाई मिथिलामा उत्पादन गरिएका तरकारीहरुको माला वनाएर लगाउने प्रचलन रहेको छ ।
महामूर्ख सम्मेलन नेपालको विभिन्न स्थानमा हुँदै आए पनि जनकपुरमा यसले निकै उचाई पाएको छ । तर यसको प्रारम्भ नेपालको विरगंजबाट भएको हो । मैथिली साहित्य परिषद विरगंज २०५० सालमा पहिलोपटक यो सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो । पहिलो पटकको महामूर्ख लाला माधवेन्द्र जी हुनुभएको थियो ।
यो सम्मेलनको परिकल्पनाकार मध्ये एक रहेका मैथिली साहित्य परिषदका पूर्व महासचिव एवं चर्चित पत्रकार चन्द्र किशोर झा भन्नुहुन्छ, ‘नेपालमा २०४६ सालमा बहुदल आएको थियो । राजनीतिक रुपमा परिवर्तनको समय थियो । यो परिवर्तनमा समाजिक तथा साहित्यिक क्षेत्रका व्यक्तिहरुको योगदानको आवश्यकता थियो, यस्तो अवस्थामा यो कन्सेप्ट आएको थियो ।’
समाजमा रहेको विकृति विसंगतिलाई समाप्त गर्न ब्यंग्यले निकै ठूलो भूमिका खेल्ने गर्छ झाले थप्नुभयो । महामूर्ख सम्मेलन प्रकृतिको कार्यक्रम भारतमा पनि पहिले देखिनै हुँदै आएको छ ।
जनकपुरमा २०६१ सालबाट महामूर्ख सम्मेलन हुँदै आएको छ । २०६१ सालमा महामूर्खको उपाधी मैथिली कवि नरेश ठाकुर, २०६२मा एमाले नेता शीतल झा, २०६३मा जनकपुर नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर हरि बहादुर बिसी, २०६४मा सदभावना नेता ओमकुमार झा, २०६५मा बरिष्ठ साहित्यकार डा. राजेन्द्र विमल, २०६६मा पूर्व मन्त्री एवं नयाँ शक्तिका नेता रामचन्द्र झा, २०६७मा नेपालका चर्चित राजनीतिक विश्लेषक सिके लाल, २०६८मा साहित्यकार रामभरोष कापडि़ भ्रमर, २०६९मा नेपाली काँग्रेस धनुषाका सभापति रामसरोज यादव, २०७०मा तमलोपाका नेता एवं सांसद डा. विजय कुमार सिंह, २०७१ मा एमाले नेता एवं सांसद शत्रुधन महतो र २०७२मा श्मसान घाटलाई स्वर्गद्वारा बनाएर चर्चा कमाएका पवन सिंघानियालाई महामुर्खको उपाधी प्रदान गरिएको थियो ।२०७३ मा सप्तरीको मलेठमा भएको घटनाका कारण अन्तिम समयमा कार्यक्रम स्थगित गरिएको थियो । २०७४ मा राष्ट्रिय जनता पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं राजसभा सदस्य वृषेशचन्द्र लाल , २०७५ मा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका मेयर लालकिशोर साहलाई, २०७६ मा मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र २०७७ मा वरिष्ठ कलाकारद्वय मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश अचार्य ‘मह’ जोडीलाई प्रदान महामुर्खको उपाधी प्रदान गरिएको थियो ।
यस वर्ष महामुर्ख को बन्ने भनेर अहिले जनकपुरधाममा चर्चाको विषय बनेको छ।
यसरी छनौट गरीन्छ महामूर्ख ?
महामूर्खको छनौट कसरी हुन्छ धेरैको उत्सुकताको विषय हुनसक्छ । सहीमा कम मेहनतको कुरो होइन धेरै दिमाग खियाउनु पर्छ आयोजकहरु बताउँछन् । महामूर्ख सम्मेलनको आयोजक मिथिला नाट्यकला परिषदका पूर्व अध्यक्ष मदन ठाकुर भन्नुहुन्छ, ‘महामूर्खको छनौटका लागि तयारी आयोजनासँग खोजी शुरु भइहाल्छ । यसका लागि एक कमिटी गठन गरिन्छ । त्यसैले निणर्य गर्दै आएको छ । केही व्यक्ति महामूर्ख बन्नका लागि कसेर लागेको हुन्छ ।’
जनकपुरधामको स्थानीय पत्रिकाहरु एक हप्ता पहिलादेखि नै को महामूर्ख बन्ने त्यसको नाउँमा चर्चा चलाएको हुन्छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ पूर्व केन्द्रिय सदस्य शैलेन्द्र झा भन्नुहुन्छ, ‘महामूर्ख जनकपुरधामको एकटा लोकप्रिय कार्यक्रम हो । यसलाई मिडियाले क्यास नगर्ने कुरै आउँदैन । फेरी मिडियामा चर्चा भएपछि कार्यक्रको आकर्षण बढने गर्छ । समान्यतया धेरैलाई लाग्नसक्छ महामूर्ख को बन्छ ? तर आश्चर्यको कुरो यो रहेको छ धेरै कामना गरिरहन्छ यसपाली म महामूर्ख बनु ।’
२०६५ सालका महामूर्खक उपाधि प्राप्तकर्ता एवं मैथिलीक बरिष्ठ साहित्यकार डा. राजेन्द्र प्रसाद विमल भन्नुहुन्छ, ‘उपाधि प्राप्त गर्नु आफैमा ठूलो उपलब्धि रहेको छ, प्रेमले मानिस हरेकथोक अर्थात विषपनि पिउने गरेको इतिहास रहेको छ । यस्तोमा महामूर्ख पाउनु ठूलो कुरो हो ।’